I-China Continuing power mechanical: I-Junya ivele ngokumangalisayo kubakhiqizi nabathengisi be-China China (Shanghai) International Exhibition 2017 Junya
Ukuqhubeka kwamandla omshini: UJunya wenze ukubonakala okumangazayo embukisweni we-China China (Shanghai) International Foundry Exhibition
Kusukela ngoNovemba 30 kuya kuDisemba 2, 2017, i-2017 China (Shanghai) International Foundry Exhibition yavulwa kakhulu eShanghai New International Expo Center! Kuyaqondakala ukuthi zingaphezulu kwama-20 izithangami zamazwe omhlaba, izingqungquthela zezimboni, neminye imisebenzi eminingi esekelayo ezobanjelwa engqungqutheleni yokusakaza yalo mbukiso, futhi kuzomenywa izikhulumi ezingaphezu kwama-260 ukuthi zibambe iqhaza. Kulindeleke ukuthi ihehe ukubamba iqhaza okungaphezulu kuka-500 kwe-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi kweBhrendi lakwamanye amazwe, okukhona kuyo imikhiqizo yamazwe omhlaba engama-50%, izivakashi ezingaxhunyiwe ku-inthanethi kulindeleke ukuthi zifinyelele ku-200,000.
I-Tianjin Junya Precision Machinery Co., Ltd. kanye nemikhiqizo eminingi eyaziwayo yokulingisa imishini evela emazweni amaningi emhlabeni jikelele, kanye nabachwepheshe bezimboni zokulingisa abaziwa emhlabeni jikelele, bajoyine umcimbi omkhulu wokusiza imboni yaseChina yokulingisa imishini ichume.
Kulo mbukiso, uJunya ukhombise ama-valve wensimbi engagqwali nokufakwa kwepayipi lensimbi engagqwali kuthandwa amakhasimende. Abasebenzi abangochwepheshe bokuthengisa banikeze isingeniso esinemininingwane kuzivakashi ukusiza izethameli ukuthi ziqonde umqondo wenkonzo eyodwa kaJunya futhi zivumele abantu abaningi Baqonde imikhiqizo esezingeni eliphakeme kaJunya nezinsizakalo ezisezingeni.
Selokhu yasungulwa, uTianjin Junya uzibophezele ekwenzeni ngcono ubuchwepheshe bokukhiqiza, ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo, nokunikeza amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ngemikhiqizo nezinsizakalo ezingcono. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, imithombo yezindaba yasekhaya neyangaphandle efana neCCTV, BTV, ne-CNN inikeze imizamo emikhulu kuTianjin Junya. Kubikwe futhi kwaqinisekiswa ngokugcwele ikhwalithi yomkhiqizo nensizakalo.
Kulo mcimbi, uTianjin Junya naye uzoqhubeka nokuhlola, aqhubeke namandla kagesi, angakhohlwa inhloso yasekuqaleni, aqhubekele phambili, futhi asebenze nozakwabo embonini ukusiza imboni yaseChina yokuphonsa imishini iqhubekele phambili!
Insimbi Engagqwali 316 Ipayipi Elifanelekayo Lokulinganisa, Engagqwali Pipe nokufaka, Izingxenye Zokulingwa Kwezimali, Engagqwali negesi Ball Valve, Industrial Valve, Ukutshalwa Kwezimali Okubunjiwe Kokusetshenziswa Kwezimali,